Abantu abaphezulu basoloko bavakaliswa ngokuba nobukho beentombi kunye nabantwana abangekho mthethweni. Ukunamathela kwiinkcukacha ezincinci, intatheli zithintela ukuvakalelwa kwangempela, ziqulunqa iinkcukacha ezingenangcaciso kunye neenkcukacha. Inomdla lobomi bubomi bukaVladimir Putin. Ukongeza kwidivayili engaqinisekisiweyo kunye no-Alina Kabaeva, ingxoxo iyaqhubeka ukuba intombi encinci yomongameli ngu-Ekaterina Tikhonova, intloko yeNgxowa-mali kaZwelonke yeNtuthuko.
Konke kwaqala njani?
Umqalisi wophando wayengumaphephandaba u-Oleg Kashin. Ngo-2015, wanyathelisa inqaku elincamisayo ngegama elincinci "Yena".
Kwimpahla yombhali uKashin ibhekisela kwipapasho ye-RBC ekwandiseni iMyuvesi yaseMoscow State. Ingqwalasela yakhe yabanjwa kwinto yokuba i-Innopraktika, ekhokelwa ngu-Ekaterina Tikhonova, iya kusebenza kule ngcamango. Ngaloo xesha, kwakungekho nto yaziwa malunga nalo mfazi, ngaphandle kokuba wayebandakanyekile emidlalweni ye-acrobatic.
Ngaphambili, intatheli yafumana ulwazi malunga nemisebenzi yentombazana encinane kaPutin, osoloko ejongene neprojekthi yokwenza inzululwazi kunye nezobuchwephesha baseMoscow State University.
Ukuqhathaniswa kwedatha kubasetyhini ababini kunye neengcali ezichaziweyo, iKashin yafikelela kwisigqibo sokuba intombi yomongameli waseRashiya ufana noEkaterina Tikhonova, owayedlala ngokugqithiseleyo, kwaye ngoku uyintloko ye-fund "NIR" kunye nomlawuli we "Innopraktiki." Ekupheleni kwinqaku lakhe, umlobi-ntatheli unikela abafundi ukuba bafumane izigqibo malunga nexesha langoku nekamva yendodakazi yokuzimela yentloko yelizwe lethu. Le meko yanyuka ngenxa yokungabikho kwi-intanethi yezithombe zangempela zikaMary noCatherine u-Putins. Ngesicelo sebasebenzisi, ii-injini zosesho zinika ezininzi iifake. Unokufumana kuphela imifanekiso endala apho iintombi zanamhlanje zincinci.
Mayelana neTikonova, akukho nto iyaziwa. I-biografi yakhe yindawo ecacileyo emhlophe, kwaye uyayenqaba nayiphi na imibono kunye nodliwano-ndlebe. Akunakwenzeka ukuba loo mfihlelo yinkwenkwe yowesifazane okanye ibangelwa ukuthozama kwintombazana. Kuyaziwa kuphela ukuba uCatherine wazalwa e-GDR ngexesha elifanelekileyo xa uVladimir Vladimirovich ahlala khona.
Abasebenzisi abaninzi be-intanethi babonana ngokucacileyo phakathi komdaniso kunye noLyudmila Aleksandrovna Putin (owayengumfazi womongameli).
Uninazala kaVladimir Vladimirovich nguYekaterina Tikhonovna Shkrebneva. U-Oleg Kashin wacetyisa ukuba intombi kaPutin yazithabatha isicwaso, esakhiwe ngesiseko segama lika-ugogo wakhe. Phakathi kwexesha elide, imijondolo yaseT.Partner Tikhonovna yayingu-Ivan Klimov. Okuthakazelisayo, umqeshwa ogama elifanayo ubalwe kwiNgxowa-mali kaZwelonke yeNtuthuko.
Kuyaziwa ukuba u-Ekaterina utshatile noKirill Shamalov, ubaba wakhe uthathwa njengomhlobo omhle kaVladimir Putin (ngokutshatyalaliswa kwama-90 basebenzise i-cooperative ehlobo "uLwandle").
UKirill ubambe isikhundla se-vice-president waseSibur, kwaye isihlobo sakhe somzali ungumnini-bhanki weBhanki Rossiya. Ngendlela, le nhlangano yezemali kunye nekhredithi ibizwa ngokuba "irejista yemali yePutin" kunye "neebhanki yabahlobo bomongameli." Ezi zivumelwano zibonakala zingenakwenzeka. Ngenye imini uBloomberg wabika umtshato kaShamalov noThikhonova, kodwa ulwazi alukaqinisekanga.
Imiba engakumbi ibangele ukubandakanyeka kwabasetyhini kwibhunga lezesayensi laseMoscow State University. Akucaci ukuba wajoyina njani (eneminyaka engama-27!) Ngaphandle kokubhala nayiphi na inqaku lesayensi okanye i -sissis. Kweminye imisebenzi yabantu i-Tikhonov ibhalwe kuphela njengomlobi-mbambano. Inokwenzeka ukuba, ngaphandle kokuxhaswa kwemikhosi ephezulu bekungekho.
I-Reuters yazisa abafundi ukuba uManfred Mohab (i-vice-president of world confederation of rock and roll on issues of law) uqinisekisile ubuhlobo bomdaniso kunye nomongameli waseRussia Federation. Ngokweentatheli-ntatheli, ngokuphindwe kabini wathola impendulo engqinayo kumbuzo wobudlelwane obusondeleyo phakathi kweTikonova noPutin.
Ngaphambili, i-arhente ebhekiswe kumazwi kaSihlalo weBhodi yeGazprombank. U-Andrei Akimov wayengowokuqala ukuqinisekisa ubungqina beReuters: "Ndiyazi ukuba le nto yayintombi kaPotin. Kodwa, ewe, sinqwenela ukuxhasa iiprojekthi zeMyuvesi yaseMoscow yaseYurophu kungakhathaliseki naziphi na iintsapho. "
Ababhali abazange balinde ukukhankanywa ngokusemthethweni kwenkolelo ye-intanethi, kodwa uManfred Mohab noAndrei Akimov bathi abazange bathethe ngoCatherine ukhonova kumxholo wobudlelwane nomongameli. Ii-arhente ezibhekiselele kumazwi abo aziboneleli ngevidiyo ethenjisiweyo kunye nokurekhoda komsindo njengobungqina. Ingqungquthela ethile yongeze uDmitry Peskov.
Umkhulumeli kaPutin uthe akanalo ulwazi malunga nobomi bomongameli, kodwa wathi ngexesha elinye: "... isabelo seenkcukacha ezichanileyo kwimpapasho yolu hlobo kuncibilikisa."
Ethetha ngentsapho yakhe, umongameli wachaza ngokucacileyo ukuba iintombi zakhe zingabantu abangabantu abangahambelani nezopolitiko kunye nezoshishino. UVladimir Vladimirovich uthe akafuni ukuxelela iinkcukacha ngezizathu zokhuseleko. Mhlawumbi i intatheli zixhomekeke kakhulu kule ngongoma, ngoko banquma ukutshintsha ibali leentlola zonke, iinkcukacha ezintsha ezikhulayo ngokukhawuleza.
Ubomi bomntu kaPutin kunye nosapho lwakhe luhlala luchaphazela onke amajelo avela kumazwe ngamazwe kwi-press yellow. Iintombi zomongameli zihlala zinikwe ngomtshato. Ngokomzekelo, ngowama-2010, umtshato womnye uKatherine kunye nomdibanisi waseKorea u-En Zhong-gu wayexoxwa ngenxaxheba kwinethiwekhi. Kwakhona, njengobungqina, amazwi aseburhulumenteni aphezulu acatshulwe, kodwa imbali yaba yindoda yephephandaba.
Bangaphi abafazi nabantwana abenza uDmitry Khvorostovsky?
Izindlu zikaVladimir Putin zibukeka njani, iifoto ezisuka ngaphakathi nangaphandle?
Indlela yokupheka i-pea porridge kwi-multivariate?
Ulwalamano oluhle emsebenzini
UMiranda Kerr ufundise u-Ivan Urgant ukuba enze i-selfies kunye ne-makeup
Iintyatyambo zangaphakathi krynum
Amaphupha azaliseka: URamzan Kadyrov ugqoke uMikhail Galustyan ezandleni zakhe, ividyo
Isaladi ye-lemon nge-arugula
Iinkalo zekhosi yokukhulelwa ngenxa ye-IVF
Ungakhetha njani uboya bokulungiswa kwengubo yoboya?
I-Pizza kunye nenyama egayiweyo kunye noshizi